काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भन्दै आएका छन्–‘सडक मगन्ते मुक्त भयो’ भनेर । एक पटक होइन, उनले यो कुरा बारम्बार दाेहाेर्‍याएका छन् । चाहे देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा होस्, चाहे संसदमा सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदा । केही समय पहिले, उनले कोही भोको मर्नु पर्दैन भनेर कविता नै लेखेपछि झन् उधुम् मच्चियो ।
प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो प्रगति भइसकेको अवस्था भने होइन । अहिले पनि सडक अर्थात् भुइँमान्छेहरुको समस्या समाधान भएको छैन । सरकारले त्यस्तो विधि काम गरेको भए निजी संस्थाले परोपकारको पछ्यौरी बिछ्याउनु पथ्र्यो र ?
प्रधानमन्त्रीले भने झैँ ‘सडक मान्छेहरु’को समस्या समाधान भएको भए, सडकबाट उठाउन, उपचार गर्न र भोक मेटाउन निजी संस्थाले हात थाम्नु पथ्र्यो । ललितपुर सानेपा, धोविघाटमा रहेको मेघा हस्पिटलाई उदाहरण मान्ने हो भने, केही समय यता यो अस्पतालले मानसिक अवस्था ठीक नभएका र सडक किनाराका फोहोरको थुप्रोमा खाना खोज्ने ४८ भन्दा बढीलाई उद्धार गरेको छ । उद्धार मात्रै होइन, निःशुल्क उपचार र उनीहरुको खाने, बस्नेको समेत प्रबन्ध गरेको छ ।
सडकमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धार मात्रै नभई अहिलेको कोरोना महामारीमा समेत मेघा हस्पिटलले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन र आइशोलुसन सञ्चालन गरेको छ । अहिले अस्पतालमा लैजाँदा समेत पखाला लागेका बालकले छट्पटाउँदै देहत्याग गर्नु परेको विषयले चर्चा पाएको छ । ऐतिहासिक नगरीको जनकपुर । त्यही कारण संघीयतामा थपिएको नयाँ संरचना प्रदेशको प्रशासनिक मुकाम हो धनुषा ।
तर, त्यही धनुषाको हंसपुर नगरपालिका प्रसाहीका १६ वर्षीय राजु सदा अस्पतालको आइशोलुशन वार्डको भुइँमा छठपटाएको भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ । उनी कतिबेला खुट्टा उचाल्थे त कति बेला हात चलाउँथे । कहिले कपाल बेस्सरी लुछ्थे, यो अवस्थामा उनले पानीसम्म पाएनन् । र, अन्ततः प्राण गयो । अहिले उनको मृत्युको विषय उचालेर सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम भरिएका छन् भने सडक तताउनेहरु बाहिर निस्किएका छन् । यहाँ, घटना घटिसकेपछि मात्रै मान्छेहरु तात्छन् । त्यो भन्दा पहिले आ–आफ्नो भूमिका र कर्तव्यमा चुकिरहेका हुन्छन् । सरकारलाई उपलब्धि सुनाउनै ठिक्क छ । र, सरकार एकातिर उपलब्धि सुनाउँदा सुनाउँदै अर्कोतिर सात काम ब्रिग्रिसकेका भेउ पाउँदैन । हामी आफु पनि कतव्र्यविमुख भएको घटना घटिसकेपछि थाहा पाउँछौँ ।
यहाँनेर मेघा हस्पिटलको उदाहरण दिएर भन्न खोजिएको के हो भने हामी जो जहाँ जुनसुकै तह-तप्कामा रहेपनि मानवीय धर्म निमाउनै पर्छ भन्ने हो । हामी निजी अस्पतालले महँगो उपचार गर्छ र भुइँमान्छेको पहुँचमा छैन भन्ने बुझ्दछौँ । तर, सेवा भावले खोलिएका निजी संस्थाले पनि परोपकारका काम गरिरहेका उदाहरण प्रसस्तै छन् । ति प्रचारमा नआएका मात्रै हुन् । त्यसरी परोपकार गर्ने मध्येको एक हो मेघा हस्पिटल पनि । कोरोना महामारीको त्रासबीच धेरै अस्पतालले अहिले सामान्य विरामीको उपचार गर्न मानिरहेका छैनन् । तर, मेघा हस्पिटलले यो अवस्थामा शल्यक्रिया समेत गरिरहेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, मेघा हस्पिटलले ७ हजार पर्ने बोलबडी जाँच समेत ३५ सयमा गरेर बरिष्ठ फिजिसियनबाट निःशुल्क परामर्श समेत दिने गरेको छ । पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यममा आउने समाचारमा निजी अस्पतालले वर्ग विभेद गरेका र विपन्नलाई उपचारको साटो दुव्र्यवहार गरेका तथ्यहरु उल्लेख भएका हुन्छन् । तर, मेघा हस्पिटलले वर्गविहिन उपचारलाई आफ्नो सेवाधर्म बनाएको छ । र, बनेको छ, विपन्नको साथी ।
1) 7000 पर्ने होलबडी मात्र रु. 3500 साथै निशुल्क वरीष्ठ फिजिसियन द्दारा परामर्श सेवा | 50% chhut offer
2) विदेश पढ्न जाने र काम गर्न जाने का लागि (for consultancy and manpower) विशेष स्वास्थ्य जाच .
3) गरिब तथा मध्यम वर्गिय लाई लक्षित गरी सबैको बाच्न पाउने अधिकार भन्ने नाराका साथ विशेष छुटको व्यावस्था ,
4) पैसा नभएका गरिब निमुखा व्यक्तिलाई १० बेड र अपाङ्ग लाई ११ बेड चार्ज निशुल्क साथै अन्य सेवा मा ५०प्रतिसत छुट .
5) कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, गायककारहरु देशका गहना हुन भन्ने नाराका साथ उहाहरु सम्मान स्वरुप (for Respect) कार्ड कोआधारमा सबै कुरामा ५०प्रतिसत छुटको व्यवस्था,
6) ICU (4500) /CCU(9000) , अप्रेसन थेटर, VIP cabin(रु १५००-७०००,जनरल वार्ड (रु५००) ,अत्याधुनिक ल्याब, फिजीयोथेरापी, डेन्टल डिपार्ट,रेडियोलोजि डिपार्ट, फार्मेसी लगायत विभिन्न किसिमका सेवा सुबिधा भएको अत्याधुनिक हास्पिटल .
7) ७० बर्ष भन्दा माथिका वृद्ध/वृद्दा हरुलाई उच्च सम्मान गर्दै ५० प्रतिशत छुटको व्यावस्था
8)अन्य हस्पिटलको तुलनामा ३०प्रतिशत माथि छुटका साथै २४ सै घण्टा ३६५ दिन स्तरीय सेवा सुविधा,
(नया व्यावस्थापन तथा हस्पिटलका विशेषज्ञ डाक्टर हरु सहित पाटन, टिचिङ्,नर्भिक र एभरेष्ट हास्पिटलका डक्टर हरु विशेष चेकजाँच)
<<< : चट्ट्याङ लागेर एकै दिन ८३ जनाको मृत्‍यु
लिभरपुलको पोल्टामा ३० वर्षपछि प्रिमियर लिगको उपाधि : >>>